मिडिया र संस्थाबीच आत्मीय सम्बन्ध हुनु जरुरी छ: नेम थापामगर, अध्यक्ष, मगर संघ युके (अन्तर्वार्ता) ! | Magar Media | मगर सन्चार
Interviews Magar Associations
२५ असार २०७४, आईतवार ००:४० July 9, 2017
मिडिया र संस्थाबीच आत्मीय सम्बन्ध हुनु जरुरी छ: नेम थापामगर, अध्यक्ष, मगर संघ युके (अन्तर्वार्ता) !
संयुक्त अधिराज्य (युके) मा बसोबास गर्ने मगरहरूको छाता संगठन मगर संघ युकेले हरेक वर्ष चर्चित सांगीतिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । खासगरी, बुद्ध जयन्ती अर्थात् चण्डी पूर्णिमाको सन्दर्भ पारेर आयोजना हुने कार्यक्रमको नाम विगतमा ‘बुद्ध पूर्णिमा ओपन कन्सर्ट’ थियो । तर, यसपालीदेखि भने ‘नेपाली ओपन कन्सर्ट’का नाममा गत जुन ३ तारिखमा कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भइसकेको छ । मगर संघ युकेका अध्यक्ष नेम थापामगर सँग मगर समुदाय र मगर संघ युकेका गतिविधिका बारेमा पत्रकार रूद्र श्रीसमगरले गर्नुभएको कुराकानी:
आजभोली के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त, धन्यवाद यहाँलाई । केही समय अघि मात्र हामी जुन ३ तारिखमा ‘नेपाली ओपन कन्सर्ट’ भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं । हामीले कार्यक्रमबारे समीक्षा पनि गरिसक्यौं । कार्यक्रम निकै राम्रो र सफल भएको निष्कर्ष निकालेका छौं । अन्य दैनन्दिन व्यक्तिगत काममा पनि निरन्तर व्यस्त छु ।
नेपाली ओपन कन्सर्टको खास महŒव के छ ?
यो चाहिँ खास युके मगर संघ स्थापनाकालदेखि युकेमा वर्षमा समरको बेलामा भेटघाट गर्ने कार्यक्रमबाट सुरुवात भएको हो । वार्षिक भेलामा भोज खाने, बाट सुरु भएको छ । सन् २००७ मा आएर भेटघाट मात्र गर्न भन्दा कन्सर्ट जस्तो गरौं भनेर कलाकार ल्याएर सन् २००७ बाट सुरु भयो । बुद्ध पूर्णिमा ओपन कन्सर्टबाट ‘बुद्ध नेपाली ओपन कन्सर्ट’ । अहिले चाहिँ नेपाली ओपन कन्सर्ट । हामी बुद्ध पूर्णिमा मनाउँछौं, छुट्टै गर्ने भएको हुनाले म्यूजिकको रुपमा मात्रै । धेरै भन्दा धेरै मगरहरू, ओपन कन्सर्टमा ल्याएर राख्ने भन्ने हुँदाहुँदै धेरै प्रकारका संस्कारहरू छन् । एकै कलरको बन्न नमिल्ने हुनाले यसलाई विशुद्ध म्यूजिकको मनोरञ्जनका रुपमा मनाउने सोंचेका छौं । बुद्ध नेपाली ओपन कन्सर्टलाई पनि पुनर्विचार गरेर नेपाली ओपन कन्सर्ट राख्यौं । युकेका नागरिकलाई पनि मनोरञ्जन गराउने हाम्रो उद्देश्य हो । कहिले मनाउने र किन मनाउने भन्दा मगर संस्था भएकाले देशप्रतिको नागरिक पनि हो, हाम्रो पनि केही कर्तव्य छ । नेपाली भएर नेपाली ओपन कन्सर्टमार्फत् बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्ने कुरालाई संसारभरि सन्देश दिन चाहन्छौं । बुद्ध र सगरमाथाको देश नेपाललाई चिनाउन चाहन्छौं । म्यूजिकमार्फत् युवा पुस्तालाई सन्देश पु¥याउने र मनोरञ्जन पनि दिने हाम्रो लक्ष्य हो । यस अनुसार हामीले यो कार्यक्रम हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएका छौं ।
मगर संघ युकेको तर्फबाट विश्वभरिका मगरहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ ?
हाम्रो संस्कार, भाषा, भेषभूषाको जागरण र राजनीतिमा समेत मगरहरूलाई बढायो, मगर संघले । ३५ औं वर्षसम्म आइपुग्दा ३५ देशभन्दा बढीमा संस्था खुलिसक्यो । भाषा जागरुक गर्नुपर्ने छ, मगरातलाई अभियानकै रुपमा लानुपर्ने छ । एउटा कदम मगरहरूलाई कल्चरको रुपमा अपनाएर आएको गाउँमा केही चिजमा पछ्याइरहेको छ । बाध्यताले गाउँमै बाँधिइराखेको छ । आर्थिक क्रान्तितर्फ लाग्न जरुरी छ । अब मगरहरूलाई समृद्धिमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवसायतिर लगाउनेतिर ध्यान दिनुपर्दछ । आर्थिक उत्पादनतिर लाग्ने वातावरण बनाउनेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । धेरै जनसंख्या भएकोले हामी भाग्यमानी छौं । सानो सानो रकमबाट ठूलो लगानी गर्न सकिन्छ । सामूहिक लगानीमा गयौं भने संस्थालाई नै मदत गर्छ । जोखिम र अवसर दुवै हुन्छन्, तर, सामूहिक लगानीमा जोखिम कम र अवसर धेरै छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सामूहिक लगानीतिर लैजान सक्छौं । युके, हङकङलगायतका विभिन्न देशका मगर संघले एकले अर्कोको देखेर सिक्न सकिन्छ । स्वास्थ्य, हाउजिङ, पावरसम्बन्धी, प्रविधि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । आर्थिकस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि सबैले आÞवान गरौं । एकले अर्कोको सिक्न पाउनुप¥यो । ३५ वर्ष अगाडि यदि नेपाल मगर संघले लगानी गरेको भए एक दुई वटा जिल्ला किनिसक्थ्यो । तर, हामी व्यवसायिक सोंच पलाउन सकेन । आर्थिकस्तर माथि उठाउनका लागि पनि यसले ठूलो सहयोग पु¥याउँछ । अब यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु ।
मगर जातिको मुक्ति र समृद्धिका लागि अबको बाटो के हो ?
म के भन्न चाहन्छु भने सबै मगरलाई सन्देश फैलाउनका लागि ग्लोबल कन्फरेन्स गर्नु जरुरी छ । एकपटक मात्रै होइन, हरेक चार चार वर्षमा गर्ने लक्ष्य हुनुप¥यो । अबको १५÷२० वर्षपछि मगरहरूलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने बारेमा सोंच्न आवश्यक छ । एक अर्कामा ज्ञान, सीप र अनुभव आदानप्रदान गर्न जरुरी छ । हामीमा पहिलेभन्दा धेरै चेतना आएको छ । अब नयाँ तरिकाले युगानुसार हाम्रो समाजलाई अघि बढाउन सोंच्नुपर्ने भएको छ ।
अन्त्यमा, के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अन्त्यमा, खासमा विश्वभरिका मगरहरूलाई जागरुक गराउन मिडियाको आवश्यक छ । मिडियालाई सहयोग गरे पो संस्थालाई मिडियाले सहयोग गर्दछ । मिडिया र संस्थाबीच आत्मीय सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ ।
उत्पिडित नेपाली जनताको मताधिकारको चेतनास्तर !
बन्यजन्तु उद्धार केन्द्र पचभैयामा ढुंगेधारा हस्तान्तरण !
मगर संघ इजरायल र आदिबासी जनजाती महासंघ इजरायलको नेतृत्व परिबर्तन भए पछि दुवै पक्ष बीच सफल बार्ता / दुवै संस्था एक भएर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्दता !
१५ श्रावण २०७४, आईतवार ००:५४ admin 0
मगर संघ कास्कीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र पठायो / संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न माग !
२३ मंसिर २०७३, बिहीबार ०४:०५ admin 0
कतारमा लखन थापा मगरको १४०औं स्मृति दिवस मनाईदै !
१ फाल्गुन २०७३, आईतवार ००:३३ Yamuna Ranamagar 0
लागु औषधको कारोबार गर्दै गर्दा पक्राउ २५ असार २०७४, आईतवार ००:४०
सगरमाथा परोपकारी समाज कुवेत द्धारा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग ! २५ असार २०७४, आईतवार ००:४०
बृहत मगर विद्यार्थी भेला सम्पन्न ! २५ असार २०७४, आईतवार ००:४०
१० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने लगायतका निर्णय सहित राष्ट्रिय विस्तारित भेला सम्पन्न ! २५ असार २०७४, आईतवार ००:४०
कान्छीबाट अभिनेत्री श्वेताको नेपाली चलचित्र जगतमा कमब्याक ! २५ असार २०७४, आईतवार ००:४०
आदर्श तारा स्मृती कप आयोजकको कब्जामा, पाहुना टोली काहुँ मिलन झापुटार २–० ले पराजित ! २५ असार २०७४, आईतवार ००:४०
मिनाम लाङ्घाली क्लवद्वारा खुला नकआउट फुटवल आयोजना, स्थानीय लाहुरे टिम बिजयी ! २५ असार २०७४, आईतवार ००:४०
अब घर घरमा ट्राफिक प्रहरीको कारवाही पत्र ! २५ असार २०७४, आईतवार ००:४०
विजनेस एण्ड प्रोफेशनल वुमेन सुनाकोठी शाखाको अध्यक्षमा प्रतिमाया पुन चयन ! २५ असार २०७४, आईतवार ००:४०
दमौलीमा मातृभाषामा साहित्यीक प्रतियोगिता सम्पन्न साथै मगर लेखक संघ तनहुँको अध्यक्षमा बिनु थापा मगर ! २५ असार २०७४, आईतवार ००:४०